Dhaloota | Ejensii Galmeessaa Ragaa Bu`uura Hawaasummaa Oromiyaa
Ergama fi Mul`ata
Angoo fi Gahee Hojii
Caaseffamaa Mana Hojii
Map fi kallattii
Imaammataa fi Taarsiimoo
Godinaalee fi Aanaalee
Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home1/overaoro/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Dhaloota:Yeroo turmaata gadameessa keessaa tilmaama keessa osoo hin galchiin daa’imni tokko akkuma gadameessa haadhaa keessaa ba’een/teen kan arganu, boo’uu ykn sochii qaamaa kan agarsiisu yoo ta’e; taateen kun lubbuun dhalachuu jedhamee waamama. Mallattoo armaan olii agarsiisee battalumatti yoo du’e/te illee ragaa dhalootaa irratti kan galmaa’u ta’a.
Iddoo Galmeessi Dhalootaa itti Adeemsifamu
Iddoon galmeessa dhalootaa waajjira bulchiinsa gandaa isa teessoon jireenyaa idilee maatiin daa’imaa keessatti argamutti ta’a.
Teessoon jireenya idilee haadhaa fi abbaa daa’imaa iddoo garagaraa yoo ta’e dhalootichi iddoo teessoo jireenya idilee haadhaa ykn abbaatti galmaa’a.
Maatiin daa’imaa kan hin jirre yoo ta’an galmeessi daa’imaa iddoo teessoo jireenya idilee guddistuu daa’ima kanaa ykn qaama daa’ima kana kunuunsuu irratti argamutti adeemsifama.
Iddoon galmeessa daa’ima gatamee argamee bulchiinsa gandaa gatamee argame sana keessatti kan raawwatamu ta’a.
Dhalootichi kan raawwatame dubartoota daandii gubbaa jiraataniin yoo ta’e galmeessi isaa ganda itti dhalate keessatti ta’a.
Dhalootichi kan raawwatame mana jireenya waliinii keessatti yoo ta’e galmeessi isaa bulchiinsa gandaa isa manni jireenya waliinii sun keessatti argamutti ta’a.
2. Daangaa Yeroo Galmeessa Dhalootaa
Dhalooni raawwate tokko guyyoota 90 keessatti galmeeffamuu qaba.
Dhalooni raawwate tokko guyyoota 90 keessatti kan galmaa’e yoo ta’e “kan yeroon galmaa’e” jedhama.
Dhalooni raawwate tokko guyyoota 90 hanga waggaa 1 jiran gidduutti kan galmaa’e yoo ta’e “kan turee galmaa’e” jedhama.
Dhalooni raawwate tokko waggaa tokkoon booda kan galmaa’e yoo ta’e “kan daangaan yeroo galmeessa irra taree galmaa’e” jedhama.
Daa’ima gatamee argame ilaalchisee Poolisii ykn qaami bulchiinsa mootummaa seera qabeessummaa qabu gatamee argamuu daa’imaatiif gabaasni isa qaqqabe guyyoota sadii gidduutti dhalooticha galmeessisuu qabu.
Haal- Dureewwan Galmee Dhalootaaf Guutamuu Qaban
Dhaloota galmeessisuuf galmeessisaan jiraataa bulchiinsa ganda sanaa ta’uu qaba.
Galmeessistoota dhalootaa kan ta’an:-
Daa’ima umuriin isaa waggaa 18 gadi ta’e galmeessisuuf abbaan ykn haati daa’imaa biyya keessas ta’e biyya alaa jiraatu qaamaan argamee galmeessisuu kan hin dandeenye yoo ta’e haadha ykn abbaa daa’imaatiif bakka bu’ummaa addaa dhaloota daa’ima sanaa galmeessisuu dandeessu kennuun dhalooticha galmeessisuu kan danda’an yoo ta’u, raayyaan ittisa biyyaas akkaataadhuma kanaan kan keessummeeffamu ta’a.
Galmeeffamaan dhalootaa lammii Itiyoophiyaa ta’ee biyya alaa jiraatu umuriin isaa waggaa 18 fi isaa ol ta’e qaamaan dhiyaatee galmeeffamuu kan hin dandeenye yoo ta’e, haadha warraa ykn abbaa warraa ykn mucaa ykn haadha ykn abbaa ykn obboleessa ykn obboleettii ykn akkoo ykn akaakayyuu isaa bakka buufachuun galmeeffamuu danda’a. Hojimaanni kuni hojii irra kan oolu hanga Embaasii fi Qonsilaan Itoophiyaa biyya alaatti argaman hojii galmeessa ragaalee bu’uuraa eegalanitti qofa ta’a.
Namni umuriin isaa waggaa 18 fi isaa ol ta’e tajaajila galmeessa dhalootaa argachuu barbaadu ofii isaan of galmeessisuun tajaajilicha argachuu kan danda’u yoo ta’u unkaa galmee kabajaa irratti odeeffannoon kutaan “Haadha daa’ima deessee fi abbaa daa’ima dhalche” jedhu guuchisiisee iddoon mallattoo haadhaa fi abbaa irratti mallattoo sarara xiqqaa (-) tu taasifama. Kutaa galmeessisaa jedhu keessatti ammoo akka mallatteessu ta’ee tajaajilicha argachuu danda’a.
Lammiin Itiyoophiyaa umuriin isaa waggaa 18 fi isaa ol ta’e biyya keessa jiru qaamaan dhiyaachuun qofa galmeeffama.
Haadhaa fi abbaa keessaa tokko lubbuun kan hin jirre yoo ta’an, lubbuun kan jiru abbaa yoo ta’e abbaan, haadha yoo taate haati ragaa du’aa dhiyeessuun galmeessisuu danda’u.
Haatii fi abbaan lamaanuu lubbuun kan hin jirre yoo ta’e, guddistuu ykn kunuunsituu daa’ima sanaa ta’uuf qaamni daa’ima sana guddisu ykn kunuunsuu irratti argamu ragaa mana murtii irraa kennameef dhiyeessuun dhalooticha galmeessisuu dirqama qaba.
Daa’ima gatamee argame Poolisii ykn qaamni bulchiinsa dhimmichi ilaallatu galmeessisuu danda’a.
Namooti dandeettii hin qabne karaa guddistuu ykn kunuunsituu isaanii galmeeffamu.
2. Ragaawwan Deggersaa.
Galmeessisaan waraqaa eenyummaa jiraataa ykn biyyoolessaa ykn paaspoortii ykn waraqaa eenyummaa raayyaa ittisaa yeroon irra hin darbiin dhiyeessuu qaba.
Galmeessistoonni dhalootaa baadiyyaa keessa jiraatan fi waraqaa eenyummaa hin qabne ragaa barreeffamaa jiraataa gandaa ta’uu isaanii ibsu ganda keessa jiraatan irraa kennamuuf dhiyeessuun galmeessisuu danda’u.
Kaampii/pirojeektii keessa kan jiraatan galmeessitoonni fi galmeeffamtoonni dhalootaa waraqaa eenyummaa gandaa hin qabaanne yoo ta’an kaampiin/ pirojeektiin/warshaan sun bulchiinsa gandaa sana keessatti kan argamu ta’uu isaa mirkaneessuun galmeessitoonni ykn galmeefamtoonnis hojjattoota kaampiin/ pirojeektiin/warshaan sanaa ta’uu isaanii kan ibsu ragaa dhiyeeffachuun galmeeffamuu danda’u.
Dhalootichi kan mudate dhaabbata fayyaa keessatti yoo ta’e galmeessisaan waraqaa ragaa beeksisa dhalootaa dhaabbata fayyaa sana irraa kennameef dhiyeessuu qaba.
Guddistuun daa’imaa dhalooticha galmeessisuuf dhiyaatu guddistuu ta’uu isaatiif ragaa mana murtii irraa kennameef dhiyeessuu qabu.
Poolisii ykn qaamni mootummaa daa’ima gatamee argame galmeessisuuf dhiyaatu waraqaa eenyummaa ykn ragaa eenyummaa isaa ibsu dhiyeessuu qaba.
Galmeessitoonni yeroo galmeessaa dabarsanii dhiyaatan kan mana amala sirreessa turan yoo ta’e ragaa mana sirreessaa turan irraa, kanneen yaalama turan dhaabbata fayyaa ykn amantaa keessatti yaalamaa turan irraa akkasumas kan yaala aadaatiin gargaaramaa turan qaama yaala aadaa kennaafii ture fi kkf irraa ragaa sababa turaniif ibsu dhiyeessuu qabu.
ERGAA DAAREKTARA OL'AANAA
Sirna galmeessa sanada ragaa sivilii karaa itti fufinsaa fi hunda galeessa ta’een galmeessanii bu’aa galmeessa kanarraa argamus karaa amayya’aatiin qindeessuun, mirga lamiiwwanii kan namummaa, hawaasummaa fi Siyaasaa heera biyyattii keessatti mirkanaa’an karaa guutuu ta’een hojiirra oolchuuf ragaa seeraa eenyummaa mootummaadhaa fi nama dhuunfaatiif argamsiisuun lammiiwwan misooma diinagdee, hawaasummaa fi bulchiinsaa biyya isaanii irratti guutummaatti akka hirmaatanii fi fayyadamaa akka ta’an kan dandeessisu dha.
Tomorrow, September 26, 2021
Home » TAJAAJILAA
Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa Federaalaa
Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa
Copyrigt@2021,OVERA ALL Rights Reserved
Design by, OSTICA Admin Team